indlu encinci epholileyo emaphandleni
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVeronique
indlu encinci eneempawu ezininzi, i-oveni yesonka esidala esiyifakelwe ukuba sinamkele kwindawo eshushu. ilali encinci ezolileyo, indawo yokupaka, indawo enempahla ezininzi. Zininzi izinto ukufumanisa kummandla, apho siya kukuvuyela ukukubonisa ukuba unqwenela, kwaye ukuba kudlula nje nge okanye ufuna nje kuphumla, uya kufumana iincwadi DVD kunye TV onazo. Indlu ifakwe izinto ezibalulekileyo.
Sihlala kwifama endala, siye safakela i-outbuilding eyayiligumbi eline-oven yezonka yokwenyani esetyenziswa ngabantu belali, ukuze isebenze kangangoko ngelixa igcina isimilo saloo ndawo.
ilali ibekwe kakuhle kakhulu, kwiinduli ze-Artois. Kufuphi uya kufumana ihlathi lesizwe lase-Ohlain kunye nemisebenzi yalo emininzi yokuzonwabisa, inqaba yayo. I Louvre Lens limalunga ne-15 km, isixeko Arras nezikwere zayo enhle, iisayithi ze Vimy, Lorette, Loisinord e Noeux Les Mines, kwithambeka yayo ski, ichibi ... ezininzi kwiinkalo balo ukuba benze ibhayisekile okanye ngeenyawo, ukufikelela kwi-Eurovélo5 kumgama weekhilomitha ezimbalwa
Mna neqabane lam siya kukuvuyela ukukwamkela kwaye ndikuxelele malunga nommandla, ukuba uyafuna. Indawo yokulala ikwintendelezo yethu, yaye ukuba sikho, siya kuba sinawe xa kukho imfuneko kunye nolwazi.
Ukuba asikho, unokuqokelela izitshixo kwibhokisi yesitshixo
Mna neqabane lam siya kukuvuyela ukukwamkela kwaye ndikuxelele malunga nommandla, ukuba uyafuna. Indawo yokulala ikwintendelezo yethu, yaye ukuba sikho, siya kuba sinawe xa kukho i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gouy-Servins